I-Gästehaus Jäger - Ifulethi 1
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nicole - Travanto
U-Nicole - Travanto unokuphawula okungu-381 kwezinye izindawo.
Ifulethi eline-balcony enkulu (ilanga lasemini nantambama). Ikhishi elikhulu lokudlela (okuhlanganisa nombhede wosofa wabantu abangu-2), igumbi lokulala elingu-1 (abantu abangafika kwabayi-4) kanye negumbi lokugezela elineshawa nendlu yangasese. Ifakwe ngokugcwele ngombhede nelineni letafula, amathawula.
Ifulethi lamaholide elinethezekile, elinefenisha ephelele epulazini.
1 Igumbi lokulala lomndeni, 1 umbhede, 1 umbhede wengane. 2 imibhede eyengeziwe engaba khona egumbini lokuhlala / ekamelweni lokulala.
I-balcony enkulu enelanga, ikhishi elinohhavini, umshini wokugeza izitsha, iketela, i-TV yesathelayithi, i-inthanethi, ucingo, njll.
Jabulela iholide lakho nathi efulethini leholide epulazini! Ipulazi lethu elincane litholakala cishe ku-2 km enyakatho ye-Mariapfarr cishe ngamamitha ayi-1200 ngaphezu kwezinga lolwandle ohlangothini olunelanga, eduze komgwaqo, phakathi nendawo yasemaphandleni. Indawo ethule, enelanga, umoya womndeni kanye namafulethi amabili eholide akhanyayo, athokomele aqinisekisa ukuthi uzozizwa usekhaya nathi zisuka nje. Ngobisi lwe-hay yemvelo kanye neqanda lebhulakufesi kusuka epulazini kuya osukwini oluhle kakhulu lweholide! Ukubukeka okuvela kuvulandi kuzokulinga ukuthi ujabulele imisebenzi eminingi e-Lungau enhle, ehlobo nasebusika. Izingane zingahlala ngokuphepha epulazini futhi zazi izilwane zethu (amakati, onogwaja, izinkukhu, izingulube, izinkomo). Qaphela futhi isiqinisekiso selanga! Ilanga likhanya nsuku zonke nathi - uma kungenjalo, uzothola indawo yokuhlala yamahhala ebusuku eholidini lakho elilandelayo. Izwa ukuzola nobuhle bezintaba kanye nathi ngaso sonke isikhathi sonyaka - siyajabula ukuba ababungazi bakho!
Inkonzo yokulethwa kwesinkwa nsuku zonke;
Ubisi lwe-hay oluhlanzekile namaqanda asekuseni avela epulazini lethu;
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-381 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
I-Mariapfarr - indawo enelanga kakhulu e-Austria itholakala maphakathi ne-Lungau Basin endaweni eyingqayizivele "Lungau Biosphere Park". Yindawo ekahle yokuqala yokuhamba ngezinyawo, kusukela ekuhambeni kwantambama endaweni yaseNock embozwe ngotshani kuya ohambweni lwentaba olufuna kakhulu endaweni ephansi ye-Tauern.
Ubusika: Isifunda sokushushuluza esiqinisekile ngeqhwa i-Oberlungau yenza izinhliziyo zabo bonke abashwibi bashaye ngokushesha. Izindawo zethu zomndeni ezijwayelekile zokushushuluza (Fanningberg, Großeck-Speiereck, Aineck-Katschberg) zingafinyelelwa ngebhasi lamahhala lokushushuluza elisuka e-Mariapfarr. Ngokufuna kakhulu, i-Obertauern ingafinyelelwa ngesikhathi esifushane.
I-Cross-country skiing nge-laser biathlon esikhungweni sokushushuluza esinqamula izwe se-Lignitz.
Ibungazwe ngu-Nicole - Travanto